“လှုပ်လှုပ်ရွရွ အလှူဝင်တဲ့ည ” (ငယ်လွမ်းချင်း အမှတ်သုံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “လှုပ်လှုပ်ရွရွ အလှူဝင်တဲ့ည ” (ငယ်လွမ်းချင်း အမှတ်သုံး)
“လှုပ်လှုပ်ရွရွ အလှူဝင်တဲ့ည ” (ငယ်လွမ်းချင်း အမှတ်သုံး)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 13, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
“လှုပ်လှုပ်ရွရွ အလှူဝင်တဲ့ည ”
ကျနော်မှတ်မိသလောက် မြန်မာပြည်မှာ TV ဆိုတာကြီးပေါ်လာမှ “ရုပ်မြင်သံကြား”ဆိုတဲ့စကားလုံးက
၁၉၈၃ခုနှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာမှ မြန်မာပြည်တနံတလျား သုံးခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်မြင်သံကြား ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို
၁၉၇၀ခုနှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကတည်း မတ္တရာနယ်ဘက်မှာတော့ သုံးခဲ့ကြတာပါ။
ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာကို မျက်စေ့ထဲမြင်လာအောင်ပြောရရင် “တေးသရုပ်ဖော်ကပွဲ”ပါဘဲ။
အဲဒီခေတ်က ကက်ဆက်ဆိုတာ ဘယ်နေမှန်းမသိ။
တိတ်ရကော်ဒါဆိုတာ မြို့က သူဌေးအိမ်မှာ မှ သုံးတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်ခံတဲ့အရာတစ်ခု။
တောမှာတော့ ဓါတ်စက်နဲ့လော်ကြီးတွဲလိုက်ရင် ဒီရွာတင်မကဘဲ ဟိုဘက်ရွာကလူတောင်နားထောင်
အလှူရှိရှိ မင်္ဂလာဆောင်ရှိရှိ ဒီလော်ကြီး ဖွင့်လိုက်ရမှပြည့်စုံတာတော့အမှန်ပါဘဲ။
ရုပ်မြင်ရမယ် လူတွေက သရုပ်ဆောင်ပြကြတာကိုး။
ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်း ပြဇာတ်တွေထဲကပြောဆိုငိုတဲ့အတိုင်း လိုက်ပြီး အမူအယာလုပ်လို့
မင်းသားမင်းသမီးအစ လူကြမ်းအဆုံး အပြင်လူမပါ ရွာသူရွာသားတွေကဘဲ သရုပ်ဆောင်ကြတာပါ။
အားလုံးက အနုပညာသည်မပါ ကိုယ့်ရွာသူရွာသားအချင်းချင်းဘဲ သရုပ်ဆောင်ကြ
(မောင်လာမယ်ဆိုဆို ပျိုစောင့်လို့ကြို ရွှေကျီးလေးသံချိုချိုသာပါအုံးဆို…………….
တဲ့ အငြိ်မ့်မင်းသမီးလေး ယုနဲ့ လူဆိုးကြီး ဘခက် )ဆိုတာတွေက ခေတ်ပြဇာတ်တွေပါ။
မောင်မှူး(ထန်းပင်ကျရေ ထန်းပင်ကျရေ ချိုတမြမြခါးသလေလေ့ ………….ရွှေမန်းကျော်အောင်ရဲ့ “မေဓါဝီ”တို့(အိုမောင်တော် ရွှေသမင်ဖိုကြီးရေ……………………….)
အောင်မောင်းရဲ့ “ပဒုမပေါင်တို ”
(မမ ပေးမှ ကျွေးမှ စားရမယ့်သူပါ မမရယ်……)တို့က နာမယ်ကျော်ဇာတ်ထုတ်တွေပေါ့။
ဟာသဆိုရင် ဓါတ်ဆီဓါတ်ဆံရဲ့ ရေနံချောင်းက ဖေကံကောင်း
အဲတော့ရုပ်မြင်သံကြားအဖွဲ့ကလဲ ဒီနာမယ်ကြီးဇာတ်တွေကိုဘဲ ဖွင့်လို့ ကကြတာပေါ့။
ညည ဆိုရင် အလှူမတိုင်မီ တစ်ပါတ်လောက်ကတည်းက ဇာတ်တိုက်ကြတာကို
လာအားပေးကြတာက ရွာခံတွေတင်မဟုတ်ဘဲ ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွာလူတွေပါလာကြတာပါ။
ဒီရန်ကင်းဆိုတဲ့ရွာလေးက ဒီပြင်ရွာနဲ့စာရင် သီးသန့်ရှိနေတဲ့ရွာလေးပါ။
ဒီအလှူပွဲမှာ ၀တ်စုံအပြည်နဲ့ ကကြပြုကြမှာကို မျှော်လင့်တကြီးနဲ့စောင့်စားနေသူကလဲ
နောက်ဒီနယ်ဘက်မှာ စီးပွားရေးသိပ်မကောင်းတော့ အခုလို အလှူကြီးမဖြစ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ ဒီအလှူကို အားလုံးက အားခဲ့ထားကြတာလဲ အမှန်။
နောက်ကြားရခဲတဲ့ “မန္တလေးဆိုင်း “ကလဲပါအုံးမှာဆိုတော့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲအလှူပွဲပါဘဲ။
ညနေခင်းကလေနီကြမ်းအဆင်မှာ အလှူမဏ္ဍပ်ပြိုကျသွားတယ်လဲကြားရော အနီးအနားရွာကလူတွေကလည်း
အလှူအမ မေ့လဲသွားတယ်လဲကြားရော စုပ်တသပ်သပ်နဲ့။
ဘယ်လိုဝိုင်းရမလဲ ဘာလုပ်ပေးမလဲ ဆိုပြီး ကူညီပေးဘို့အဆင်သင့်။
ခဏနေတော့ရွာဦးဆရာတော်ကိုယ်တိုင် တုတ်ကောက်လေး တထောက်ထောက်နဲ့ရောက်လာပါတယ်။
ဆရာတော်လဲ အလှူ့အမ နေတဲ့ အိမ်ကိုတန်းသွားပါတယ်။
“ဟဲ့ မယ်ရင် မပူနဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်။
ပေး…………..သောက်ရေတစ်ခွက် “ လို့တောင်းတဲ့ပြီး ရေခွက်လေးလဲလက်ထဲရောက်ရော
လက်ကလေးနှစ်ဖက်အထက်မြောက် မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ပြီး ဘုရားကို အာရုံပြု
အတော်ကြာမှ သူ့လွယ်အိတ်ထဲက သွေးဆေးပုလင်းလေးထုတ် သကြားလေးနည်းနည်းရောပြီး
“ဘုရားဆေး ဓမ္မဆေး သံဃာဆေး”လို့အဆုံးသတ်ရွတ်တဲ့ပြီး
“ကဲ စိတ်ငြိမ်သွားအောင် ဒါလေးသောက်ပြီး ခဏလှဲနေ ဘာမှမပူနဲ့ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်”
လို့မိန့်မှ မအုန်းရင်လဲ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေး ပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်။
ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးက “အလှူ့ဒကာကြီး လဲလာ အားလုံးလဲလာ ညတွင်းချင်းမဏ္ဍပ်ကိုအပြီးပြန်တည်မယ်”
ဆရာတော်ကြီးရဲ့အစီအမံအတိုင်း အဦးဆုံးမဏ္ဍပ်ထဲက အပျက်အစီးတွေအရင်ဆွဲထုတ်ပြီးဘေးမှာပုံ။
ရွာက ကပ်ယက်တဲ့အိမ်က ကပ်တွေသွားယူ။
တစ်ချို့ကလဲ ထမင်းဟင်းချက်မယ့်နေရာက အပျက်အစီးတွေဖယ်။
ပြိုကျသွားတဲ့ ထမင်းစားရုံက ဘေးအကာတွေကို ပြန်ဆောက်။
၀ိုင်းလိုက်ဝန်းလိုက်ကြတာ ည ဆယ်နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာပြီးသွားပါတယ်။
ဟိုနားက “ဆရာမောင်” ဆိုပြေးလိုက်ရ
ဒီနားက “ဆေးနီလုံးရေ.”ဆိုရင်သွားလိုက်ရနဲ့ မအားနိုင်အောင်
ပြေးလွှားနေရရှာတဲ့ အလှူရှင့်ကြီးခဗျာလည်း ဖင်ချထိုင်နိုင်ပါတော့တယ်။
ရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ မဏ္ဍပ်ကြီး ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ
လက်ဖက်တွေဂျင်းတွေနဲ့ ပဲလှော်ကြော်တွေကို ဇလုံကြီးတွေနဲ့သုတ်
ထမင်းတွေကိုလဲ ဇလုံကြီးတွေနဲ့ထည့်ဇွန်းတွေတပ်ပြီးတစ်ယောက်တစ်လက် တပျော်တပါးကြီး စားလိုက်
မီးစက်တွေမောင်းထားပြီး အသစ်တဖန်ပြန်ဆောက်ထားတဲ့ မဏ္ဍပ်ကြီးကို ကြည့်မ၀ ရူ့ဝမနိုင်ပါဘဲ။
ညသန်းခေါင်ကျော်ပြီဆိုမှ အားလုံးလဲ စိတ်ချလက်ချနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်ကြပါတော့တယ်။
အလှူအ၀င်ရက်မှာတော့ မနက်ကတည်းက အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ။
နောက်နေ့အလှူလှည့်တဲ့အခါ ကိုင်ကြမယ့် ကွမ်းတောင်ပန်းတောင်တွေကိုလုပ်တဲ့သူကလုပ်၊
ပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေကို ဆက်ကပ်မယ့် လှူဘွယ်ပစ္စည်းတွေကို နေရာချသူကချ။
ည ရောက်ရင်ဧည့်ခံဘို့အတွက် လက်ဖက်တွေဂျင်းတွေ အဆင်သင့်လုပ်သူက လုပ်။
ထမင်းရုံဘက်တာဝန်ယူသူတွေကလဲ နောက်ရက်မှာပြင်ဆင်ကျွေးမယ့် ပုဂံခွက်ယောက်တွေ၊
ဟင်းခပ်ဇွန်းတွေယောက်ချို ပုဂံလုံးတွေ ပုဂံပြား တွေ ကို စစ်သူစစ် သန့်ရှင်းအောင် သုတ်သူသုတ်။
ထမင်းရုံမှာသုံးဘို့ ရေတွေကို လှည်းနဲ့တိုက်လို့ ရာဝင်အိုးတွေထဲဖြည့်သူကဖြည့်။
ထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ ထင်းတွေခွဲသူကခွဲ။
ဒါတောင်အလှူမှာကျွေးမယ့် ဆန်တွေက အစောပိုင်းရက်တွေကတည်းက
စပါးလုံးတွေခဲတွေကောက်ပြီး သန့်စင်ပြီးသားမို့ အလုပ်တစ်ခု ငြိမ်းနေတာပါ။
ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ့် ဂျင်း ကြက်သွန်နီဖြူ နဲ့ ငရုတ်တွေကို
အခွံနွာသူနွာ ထုသူထု ထောင်းသူထောင်း။
အချိုပွဲအတွက် ဆနွင်းမကင်း တို့ကျောက်ကျောတို့လုပ်ဘို့အုန်းနို့ညှစ်သူကညှစ်။
ပျားအုံတုတ်နဲ့ထိုးသလိုဘဲလို့ပြောချင်ပြော ပုရွက်အုံတုတ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ ဘဲဥပမာပေးပေး
ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင်မခိုမကပ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာကလဲ ချီးကျူးလေးစားစရာ။
အပျုိုခေါင်းလူပျိုခေါင်း ကာလသားခေါင်း ကာလသမီးခေါင်းတွေကလဲ သူ့အစုနဲ့သူ
အကွက်စေ့နေအောင် စီစဉ်ညွှန်ကြား နေကြရတာမအားနိုင်အောင်။
အလှူ့အမ မအုန်းရင်မလဲ လွယ်အိတ်စလွယ်သိုင်းလို့ ဟိုးနားရောက်လိုက်ဒီနားရောက်လိုက်။
လူပင်ပန်းတော့မျက်နှာကခပ်နွမ်းနွမ်း ပေမယ့် ပီတိအပြုံးလေးတွေကြောင့်လန်းနေသလို။
အလှူဒါယကာကြီး ဆေးနီလုံးကတော့ ဆေးပေါ့လိပ်တစ်စီး ရေနွေးတစ်အိုးနဲ့
သူ့ကို တစ်ခုခု လာပြောရင် “မင်းတို့ အမ မယ်ရင့် ပြောကွာ”ဆိုတာနဲ့ဘဲပြီးသွားပါတယ်.။
ဒီအလှူမဏ္ဍပ်မှာ မျက်နှာအပွင့်ဆုံးလူကိုပြပါဆိုရင်တော့ ဓါတ်စက်ဆရာပါဘဲ။
အလှူဆိုင်းဆိုတာက မြို့ကြီးသားဆိုပြန်တော့ ဟန်ချီပန်ချီ
သူတီးတာ ကို နားထောင်ရမှာ သူ့သွားပြီးတော့ ဟိုဟာတီးပါ ဒီဟာတီးပါဘယ်ပြောရဲကြမလဲနော်။
သူတီးပြန်ရင်လဲ မဏ္ဍပ်ထဲမှာဆိုတော့ တော်ရုံလူမ၀င်ရဲ။
ဓါတ်စက်ကတော့ အလှူအ၀င်ပေါက်ဒေါင့်နားမှာဆိုတော့ ငေးလို့ရတယ်။
မဏ္ဍပ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ အားရပါးရ ဖင်ချထိုင်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်။
ကိုယ်နားထောင်ချင်တာလေးကိုလဲ ဓါတ်စက်ဆရာသဘောကောင်းရင် ကောင်းသလို ပူဆာလို့ရတယ်။
အဲတော့ ဓါတ်စက်ဆရာလာပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးတွေကအရင်ဝိုင်းအုံလာတော့တာပါဘဲ။
ဓါတ်စက်ဆရာကလဲရောက်တာနဲ့ စက်တွေချ လော်ကတော့ အရင်ကတည်းက
မဏ္ဍပ် ထိပ်မှာရော အဲဒီနားက သစ်ပင်ထိပ်ဖျားမှာရော အတပ်ခိုင်းထားပြီးသား။
စစချင်း မင်္ဂလာရှိအောင် ကြည်နူးဘွယ်လေး ရေခင်းလေးဖွင့်.။
ပြီးတာနဲ့ ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ မင်္ဂလာရှိလှတဲ့
“စီးပွားရေးနဲ့ ကြီးပွားရေး သမီးရီးစားအရေးလဲအောင်ပါစေ……
ဖွင့်ပြီးရင် ရွာအကြိုက် လိုက်ဖက်တဲ့သီချင်းတွေစပါတော့တယ်။
ရွာသားများ အသဲစွဲ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့
“အလှုက အသံချဲ့စက်ဆရာ ဖွင့်ပြန်ပြီကောတစ်ခါ နှစ်ဦးသားအကြည့်ခြင်းဆုံ ရင်ခုန်တဲ့အကြောင်းအရာ”တို့
“မျက်ရိပ်ပြလို့ချစ်ကြိုးသွယ် တေးသံပေးလို့ချစ်ကြိုးသွယ် ……………….
အောက်ပြည်ကိုမောင်ကြီးလာခဲ့မယ်” တို့ဆိုတာတွေကို ဓါတ်ပြားတစ်ချပ်ပြီးတစ်ချပ်ဖွင့်တော့တာပါဘဲ။
သီချင်းတွေ ငြီးငွေ့သွားရင် ခေတ်ပြဇာတ် တစ်လှည့်ဖွင့်။
အဲဒါတွေပြီးပြီးဆိုရင် လူကြီးများအကြိုက် ရွှေမန်းတင်မောင် ဗုဒ္ဒ၀င်တို့
ရွှေကျီးညိုပဲခူးမြရဲ့ သဒ္ဒါသုမနတို့ အောင်မောင်းကြီးရဲ့ မဟာဒုတ်တို့လို အလှုနဲ့လိုက်ဖက်တာလေးဖွင့်ပြီး
နေ့လည်ခင်းရောက်ရင်တော့ အဆိုအငိုအပြော အလွမ်းအသောစုံပါတဲ့ ရှေးဇာတ်ထုပ်တွေဖွင့်လိုက်ရတာ
ထမင်းတောင် ဓါတ်စက်နားမှာ ဇွန်းတပ်စားရတာပါဘဲ.။
အလှူအကြိုရက်မှာ လာဝိုင်းပေးတဲ့သူများကို အလှူ့ရှင်က ညမနက်ထမင်းကျွေးရပါတယ်။
ကျောက်ဖရုံသီး သားပြွန်းနဲ့ ငါးကလေးခြောက်နဲ့ ငရုတ်သီးကြော်ရယ်
ပဲဒီချဉ် သုတ် သရက်သီးပိုးတီသုတ်တွေကြွေးတာပါဘဲ။
ဒါပေမယ့်လဲ ထမင်းချက်ချောင်က လူတွေမှာ မနက်မီး ညမီးဆက်လို့ နားရတယ်လို့မရှိပါဘူး။
လပ်ယားလပ်ယားနဲ့ ပျော်နေတာကတော့ ကျနော်တို့မောင်ရင်လောင်းတစ်သိုက်ပါဘဲ.။
မဏ္ဍပ်ထဲဝင်ပြီး ရွယ်တူကလေးတွေက အားကျသလို့ကြည့်နေတာကိုအရသာခံရင်းဆော့လိုက်။
ဓါတ်စက်ဆရာကို ဟိုဟာမပါဘူးလား ဒီဟာမပါဘူးလား မေးလိုမေး၊
ကျနော်တို့မောင်ရင်လောင်းတွေရဲ့ ဘော်ဒီဂတ် အကိုကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ ဖတ်ဖတ်ကိုမောနေမှာ
ကျနော်တို့အုပ်စုလိုက်ကြီး တသီတတန်းကြီးသွားတဲ့ နောက်ကို လျောက်လိုက်နေရတာကိုး။
ညနေလေးနာရီလောက်လဲရောက်ရော ကျနော်တို့အားလုံးကိုစု ရေချိုးပြီး ထမင်းတွေစားခိုင်းပါတော့တယ်။
နောက်မှ ကျနော်တို့ကိုအလှတွေပြင်ပေးမယ့် “မာမီအောင်”လက်ထဲအပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အလှပြင်ပေးတဲ့ “မာမီအောင်”က နားသမယ့်နှစ်ယောက်ကိုအရင်ပြင်။
အပြင်ဘက်မှာလဲ ညဧည့်ခံမယ့်ဆိုင်းအဖွဲ့ က “ပလုံ ပလုံ ပလုံ ဗေထိ ဗေထိ ဂျိ ဂျိ “ဆိုတဲ့အသံတွေကြားလေ
ဒါပေမယ့် အလှပြင်တာ မပြီးမချင်းဘယ်မှ မသွားရဘူးဆိုတော့ ပြူတင်းပေါက်ကနေဘဲ
မာမီအောင် စိတ်တိုင်းကျပြင်ပြီးတော့ ညအတော်လေးမှောင်ခါနီးနေပါပြီ။
အားလုံးပြီးပြီဆိုမှာ မဏ္ဍပ်ထဲကိုတန်းစီဝင်ပြီး မောင်ရင်လောင်းတွေထိုင်ဘို့နေရာမှာ ၀င်ထိုင်ရပါတယ်။
အားလုံးကကျနော့်တို့ဝင်လာတော့ ၀ိုင်းကြည့်ကြတာ ရှက်များတောင်ရှက်ပါရဲ့။
ရွာက ကလေးတွေကတော့ ကျနော်တို့ကို အလှပြင်ပေးတဲ့ မာမီအောင်တို့အဖွဲ့ကိုကြည့် ပြီး
ကလေးပီပီ အားမနာပါးမနာ လက်ညိုးတထိုးထိုးနဲ့ပြောရင်း သဘောကျလို့ တခွိခွိ။
အပျိုလေးတွေနဲ့ကာလသားတွေ ကတော့ ကြည့်ကြည့်ပြီး တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ တွတ်ထိုးရင်း အသံမထွက်အောင်ရီကြ။
လူကြီးတွေက တော့ အိနြေ္ဒရရနဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံး။
သူတို့ဆီမှာ ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်မှမမြင်ဘူးတော့ ဆန်းနေသပေါ့။
မာမီအောင်တို့ကတော့ ဒါမျုိးတွေရိုးနေပြီဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့မျက်နှာလေးခပ်မော့မော့။
လူတွေကြည့်နေမှန်းသိမှ အလှမပျက်သေးတဲ့ ကျနော်တို့ကို
ဆိုပြီးတို့ပတ်လေးနဲ့မျက်နှာပွတ်လိုက် မေးလေးတို့လိုက် နုပ်ခမ်းနီလေးပြန်ဆိုးပေးလိုက်နဲ့
အမေ မအုန်းရင်ကလဲအလှတွေပြင်လို့ အဘဆေးနီးလုံးက လဲ တိုက်ပုံတွေဘာတွေနဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်
ဆိုတော့ အားလုံးက “လူတောင်မှားသဟဲ့” ပြောယူရတဲ့အထိပါဘဲ။
အလှုလာတဲ့လူတွေနဲ့မဏ္ဍပ်အပြင်ဘက်ကနေ ဆိုင်းလာနားထောင်တဲပူတွေကလဲ တရုန်းရုန်း။
အဲတော့ ရှုပေါက်ချင်တာလိုလို ဗိုက်ဆာတာလိုလိုနဲ့ တစ်ယောက်ခြင်းအောက်ဆင်းပါတယ်။
အစကတော့ မာမီအောင် တို့က တဟဲ့ဟဲ့လုပ်နိုင်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်ယောက်ပွေလီနေကြတဲ့
ကျနော်တို့အဖွားတွေကလဲ ကျနော်တို့ကိုခေါ်ခေါ်ပြီး ဘယ်သူ့သားလေ ဘယ်ဝါသားလေနဲ့
လူကြီးတွေအားလုံးကလဲ ကိုယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်စကားတွေပြေနေကြ။
မဏ္ဍပ်ဒေါင့်မှာထိုင်ရင်း သူတို့နဲ့ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ အပျိုလေးတွေနဲ့လေပေးဖြောင့်။
လက်ဖက်တစ်ပွဲ မုန့်တစ်ပွဲ့နဲ့ ငြိမ်ကုတ်နေကြပါတယ်။
ကိုးနာရီကျော်ကျော်လောက်ရောက်တော့ မနက်လဲအစောကြီးထလှည့်ရမှာဆိုပြီး အလှူသိမ်းဘို့လုပ်ပါတယ်။
အိပ်ယာပြင်ထားတဲ့ အိမ်ကိုပို့ဘို့ မောင်ရင်လောင်းတွေလူစု။
“အင်း….အဲ…………”နဲ့ရေရေ ရာရာ မပြောနိုင်။
မာမီအောင် တို့အဖွဲ့မှာလည်း တာဝန်မကင်းသလိုလိုဖြစ်နေပြန်တော့
“ သူတို့လူတွေမဖွက်ဘို့သေချာမှာပြီးသား သူတို့မဖွက်ရဲဘူး”လို့မ၀ံ့မရဲနဲ့ပြော။
မိဘတွေမှာလဲ” ရှာပါအုံးဟဲ့ ပြုပါအုံးဟဲ”့နဲ့ အသံတွေထွက်။
ရွာဦးကျောင်းက “ဦးဇင်းဇ၀န”ရောက်လာပြီး ဘာဖြစ်နေကြတုန်းလို့
“ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ မောင်ရှင်ကို ဘာလို့ လက်လွတ်စံပယ်ထားကြတာလဲ”
လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဘာဖြေရမှန်းမသိဘဲ အားလုံးငြိမ်ကျသွားပါတယ်။
“ဦးဇင်းဇ၀န” ကို အားလုံးကကြောက်ကြပါတယ်။
“ဘယ်တွေလိုက်ရှာပြီး ပြီလဲ “လို့မေးလိုက်တော့
“တော်တော……………….”လို ဦးဇင်းက ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ ရွာသားတွေကြောင့် မဏ္ဍပ်ကြီး ညမကူးဘဲ ပြီးသွားခဲ့ရတာပေါ့နော်..
မအုန်းရင်ခမျာ ခဏတော့ အနားရသွားတာပေါ့ ..ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီးပါ…
လေးပေါက်ပြောတဲ့ ပြဇာတ်တွေ၊သီချင်းတွေ တစ်ခုမှ မသိဘူး..
‘ကိုရယ်၊တိုးရယ်၊စိုးစိုးရယ်’ ဆိုတာတစ်ခုပဲ ရုပ်ရှင်လား ကြည့်ဖူးတယ်…
မောင်ရင်လောင်းတွေကို မလှည့်ခင်ညကတည်းက ကြိုပြထားရတာတော့ ထူးဆန်းတယ်..
မောင်ရင်လောင်းက နှစ်ယောက်ဆိုတော့ နတ်ဖွက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်..
လူလည်း မဖွက်လောက်ဘူးဆိုတော့…သူတို့ဟာသူတို့ တိုင်ပင်ပုန်းကြတာများလား
ညက ဖေ့ဘုတ်က ဖတ်ပြီးပြီ။
ကိုကြီးပေါက်က အပြီးရေးမယ် ဆိုပြီး ရက်စက်ပြန်ပါ ပကော။
“ကိုသိန်းတန်၊ ကိုသိန်းတန်၊ စိုး သင်္ဘောကြီးပေါ်တက်ခဲ့မယ်နော်။”
ဖတ်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က ကက်စက် ဇာတ်လမ်း နဲ့ စွဲစွဲလမ်းလမ်း နားထောင်ခဲ့ တာ မျက်စေ့ထဲ တရေးရေး မြင်ယောင်လာတယ် ခက်တာက ဇာတ်လမ်းအမည်တွေ တစ်ခုမှ ဖော်လို့ မရတော့ဘူး ဘီအီးဒီအောင်သိုက် ဇာတ်လမ်းဆိုရင်တော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
ကိုပေါက်ကြီးက အမျိုးမျိုးသော အတွေ့အကြုံတွေလဲ ရှိတယ် အားလုံးလောက် နီးနီးကိုလဲ မှတ်မိနေတယ် တကယ့် ပါရမီရှင်ပဲ
တချို့လူငယ်တွေ ဆို ကက်စက် ဇတ်လမ်း တွေ ကြားဖူးမှာတောင် မဟုတ်ဘူး
ဒီဘက်ခေတ်မှ ကက်စက်ဇာတ်လမ်းတွေ ပြန်လုပ်မယ် ဆိုတာ အသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ပြီး ဘာမှ လက်တွေ့ နားမထောင်လိုက်ရဘူး
ဒါ မြန်မာ့ လူနေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေပဲ
ဘီဘီစီ မှာ လာနေတဲ့ ဒေါ်မာမာအေး ရဲ့ ပြောပြစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိသေးတယ်လို
ရှေး အတွေ့အကြုံ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ မှန်မှန်ရေးနိုင်ရင်
ဖတ်လို့လဲကောင်း မှတ်တမ်းလဲ ကျန်
ဒီ့ ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတောင် ဒါလောက်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး
လူသားစားတဲ့ ဦးလာဘ အကြောင်းကတ်ဆက်ဇာတ်လမ်းကို ညဘက်ကြီးမှာ
မောင်နှမတွေနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ကြောက်ကြောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
တိုးဝှေ့ ပြီး နားထောင်ခဲ့ကြတာ ပြန်သတိရမိပါရဲ့ ..
candle မိဘတွေရဲ့ နယ်ဘက်မှာ အဲ့လိုမောင်ရင်လောင်းလေးပေါ့ စဉ့်အိုးအကြီးကြီး (သူတို့ အခေါ် ရာဝင်အိုး ) ထဲထည့်ဖွက်ထားတာ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကမသိဘဲ အလှူမှာချက်ဖို့ ကြိတ်ထားတဲ့ ဆန်အိတ်ကြီးကို အဲ့ဒီစဉ့်အိုးကြီးပေါ်သွားတင်ထားမိတယ်..
မောင်ရင်လောင်းလေးပျောက်လို့ ရှာကြတော့ အလောင်းဘဲတွေ့ ရတော့တယ်..
တစ်ဦးတည်းသောသား မောင်ရင်လောင်းလေးရဲ့ အမေကတော့ ယဉ်ယဉ်လေးရူးသွားရှာပြီး အဖေကတော့ ဘယ်ရောက်မှန်းမသိ
ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားခဲ့တယ် ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ အဖေ အမေ နဲ့ ကံဆိုးရှာတဲ့ မောင်ရင်လောင်းလေး မိသားစု အတွက်
တစ်မြို့ လုံးက ရင်ထုမနာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ….
ကိုယ့်ရဲ့ အပျော်ကြောင့် သူတစ်ပါး အပျက် မဖြစ်ရလေအောင် သတိတရားလေးနဲ့ ပျော်နိုင်ကြရင် တော့ အကောင်းဆုံးပါ….
ဟိုအရင်က ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျေးလက်အလှူပွဲကြီးကို ကွက်ကွက်ကွင်ကွင်းမြင်အောင် ရသပေါင်းစုံနဲ့ ရေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ကိုပေါက်ကိုလေးစားရပါတယ်..
ဒီပိုစ်လေးရေးဖြစ်အောင် အစဖော်လိုက်တဲ့ ညီလေး မိုးမင်းသား ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ထုံးစံအတိုင်း သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းရေးတတ်တာ အကျင့်ပါနေလို့။
ရေးထားတာလေး က မျက်စိထဲ မှာ ကိုမြင်လာအောင်ကို ဖွဲ့နွဲ့ထားနိုင်ပါပေတယ် လို့ ပြောပါရစေ။
မအုန်းရင် ဘာမှ မဖြစ်လို့။
အဲဒီလို ရှင်ပြုတဲ့ ပွဲတွေမှာ မိုးကြီးလေကြီးကျ တာ တွေ ကြားဖူးတယ်။
တွေးကြည့်တော့ ရှင်ပြုပွဲတွေ ဆိုတာ နွေမှာ လုပ်တာများတာ မဟုတ်လား။
နွေမှာ လဲ မိုးရွာတတ်ပြီး ရွာရင်လဲ သာမာန် မဟုတ်ဘဲ မုန်တိုင်း လို က ဖြစ်တတ်တာမို့ လေပြင်းတိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ အချိန်မဖြစ်ဘဲ ကိုယ့် အလှူ ချိန်မှာမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာဖြစ်တာကတော့ အတော် အစာမကြေစရာဘဲ။
ရှင်လောင်း တွေ အဆော့လွန်ပြီး မောလို့ တစ်နေရာမှာ အိပ်ပျော်နေကြတာလို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
မွန်ကစ်ကိုယ်တိုင် ရွာ့အလှူထဲမှာ ကူညီ ရင်း ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းနားထောင်ရင်း ပါဝင်ကပြနေရသလို ခံစား ဖတ်ရှုသွားပါတယ်… မောင်ရင်လောင်းလေးတွေ ဘေးမသီ ရန်မခဘဲ ပြန်တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း နောက်အပိုင်းများကို မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင့်..
ရှင်ဥပဂုတ္တ ပွဲလေးလည်းပြင်ထားအုံးနော် :harr:
ဒီတစ်ခါတော့ အလှူအမ မအုန်းရင် က အပီအပြင် လုပ်ထားတော့မယ်ထင်တာဘဲ။
ကောင်းခန်း ရောက်တော့ မှ လေးပေါက်က လုပ်ပြီ။
နယ်တွေ မှာ မောင်ရင်လောင်း အ ဖွက် ကောင်းလို့ မဖြစ်သင့် တာတွေ ဖြစ်ရ တာ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးတယ်။
ဒီဇာတ် လမ်း မှာတော့ အဲလို မဖြစ်လောက်ပါဘူးနော်…..။
အရင်တစ်ခါက ရွာကြေညာတဲ့စာ ကြားဝင်သွားလို့ပါကွဲ့
နက်ဖြန်ဆိုရင် အမှတ်လေး တက်လာပါပြီ မနက်ဆယ်နာရီ
အသား နူးချင်ရင် သဘောင်္သီးအစိမ်းထည့်လိုက်ပါ
လာဘက တော့ လူသားစားတယ်ဆိုနာမယ်ကြီးခဲ့သူ
ဒါနကတော့ နောင်ဝဘအတွက် ပါအောင် လှူဒါန်းချင်သူအတွက်
ရာမကတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင်တပည့် သစ္စာဖောက်
ဦးဇင်း ဇ၀နကိုတော့ အားလုံးကြောက်